Iifektri zezinto zokubhala - Abavelisi beZinto zase China kunye nababoneleli
Izinto zokubhala sisixhobo esifunwa ngumntu wonke, esona sixhobo siphambili sokuncedisa abafundi ukuba basifunde, kwaye izinto zokubhala yingqokelela yabantu abaninzi. Izinto zokubhala zilandelayo ziyafumaneka: iipensile, iirabha, ipensile yokulola, ipensile, ikhrayoni, iirula, incwadi yamanqaku, iphedi, ipeni, isitshixo, imakethi yebhodi emhlophe, amakishayo asisigxina, izikhonkwane kunye neziqwengana, njl. Izinto zethu zokubhala zenziwe ngemigangatho ekumgangatho ophezulu engenatyhefu kwaye ingenavumba. Singazilungisa iimveliso zakho, zibonelele ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu kunye nokupakishwa okungafaniyo ngexabiso lokhuphiswano. Zilungele iiholide, amaqela, abafundi, ukuvulwa kwesikolo, izipho zokubuyela esikolweni, njl.
Iipeni zeGel zeSquishy kunye neNcwadi yamanqaku